Fanamafisana DA-2 A3-Standard 1.Split Side Riles: Ny lamina 4pcs PP dia manome fiarovana ny marary amin'ny fianjera. 2. Platform matotra azo ampiasaina: mora esorina ary mora fitrandrahana. Ny lampihazo kidoro dia afaka manao X-ray ho an'ny takelaka aoriana ary manolotra ny marary kokoa. 3.H / F Boards Locks: Ny lakilen'ny fandriana dia misoroka ny fanala tsy mety amin'ny fandriana fandriana rehefa mitondra fiara na mitantana ny fandriana. 4.Mampandroka barazy vita amin'ny banga 5.Lamaona na tsindrona mitsangana 6.Mampiasa mitazona ...
Ny fanitarana D-A-2 A2-Drafitra 1.Split Side Riles: Ny lamina 4pcs PP dia manome fiarovana ny marary amin'ny fianjera. 2. Platform matotra azo ampiasaina: mora esorina ary mora fitrandrahana. Ny lampihazo kidoro dia afaka manao X-ray ho an'ny takelaka aoriana ary manolotra ny marary kokoa. 3.H / F Boards Locks: Ny lakilen'ny fandriana dia misoroka ny fanala tsy mety amin'ny fandriana fandriana rehefa mitondra fiara na mitantana ny fandriana. 4.Mampandroka barazy vita amin'ny banga 5.Lamaona na tsindrona mitsangana 6.Mampiasa mitazona ...
Fanitsiana A-D1 A1-Drafitra 1.Split Side Riles: Ny lamina 4pcs HDPE dia manome fiarovana ny marary amin'ny fianjera. 2. Platform matotra azo ampiasaina: mora esorina ary mora fitrandrahana. Ny lampihazo kidoro dia afaka manao X-ray ho an'ny takelaka aoriana ary manolotra ny marary kokoa. 3.H / F Boards Locks: Ny lakilen'ny fandriana dia misoroka ny fanala tsy mety amin'ny fandriana fandriana rehefa mitondra fiara na mitantana ny fandriana. 4.Mampandroka barazy vita amin'ny banga 5.Lamaody na tsindrona mitsangana 6.Mattress holde ...